काम नगर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना - Karobar National Economic Daily
काम नगर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना
query_builderMarch 7, 2017 10:17 AM supervisor_accountदिलबहादुर केसी visibility570
दोलखा: ठेक्कापट्टाको काम लिँदै हुनुहुन्छ ? समयमा जिम्मेवारी पूरा नगरे कारबाही भोग्नु पर्ला ? सडकलगायत निर्माण कार्य समयमा पूरा नगरेकाले डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटले गत आव २०७२/७३ मा केही व्यवसायीबाट हर्जनावापत ६० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिएको कार्यालय जानकारी दिएको छ । डिभिजन प्रमुख अशोक तिवारीले गत आवमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीबाट ६० लाख रुपैयाँ राजस्व गरिएको बताए ।
यसैगरी ढिलासुस्ती गरेवापत एक कम्पनीले दैनिक ३० हजार रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने भएको छ । चरिको–सातदोबाटो सडकको सहरी सडक योजनाअन्तर्गत नौसय मिटर सडक विस्तारमा पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत काम नसकेपछि ५ महिनादेखि हर्जना तिर्नुपर्ने भएको हो ।
०७१ असार मसान्तमा काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि अझैसम्म काम सम्पन्न भएको छैन । सडक कार्यालयले ६ महिना म्याद थप ग¥यो । सम्झौता गर्ने निकायले अधिकार पाएअनुसार एक पटक म्याद थप भए तापनि दोस्रो पटकदेखि सडक विभागबाट ६÷६ महिना गरी म्याद थप हुँदै आएको छ ।
स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको आग्रहमा सडक विभागले अन्तिम पटक २०७३ असोज मसान्तभित्र कालोपत्रे पूरा गर्ने र पुस मसान्तभित्र सडक डिभिजनलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धतापछि विभागले अन्तिम पटकका लागि म्याद थप गरेको हो ।
म्याद सकिएपछि ठेकेदार पुनः म्याद थप गर्नका लागि शक्ति केन्द्र हारगुहार गरिरहेका छन् । म्याद थप नभए ठेक्का सम्झौताअनुसार दैनिक ०.०५ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार महतोले जानकारी दिए ।
पुनः म्याद थप नभए कम्पनीले दैनिक ३० हजार ११४ रुपैयाँ हर्जनावापत तिर्नुपर्छ । तर, ठेक्का लागतको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त कम्पनीले अधिकतम ६० लाख तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
सिन्धुली: सितलपाटी–९ सडक भासिएपछि बिपी राजमार्ग धुलोग्रस्त छ । यसले यात्रु र स्थानीयसमेत प्रभावित भएका छन् । एकतर्फी गाडी सञ्चालनको कारण लामो समयसम्म सवारी साधन रोकिने गरेका छन् ।
धुलोका कारण गाडी चालकहरूलाई पनि असहज हुने गरेको चालकहरू बताउँछन् । पैदल यात्रुहरू नजिकै आउँदा पनि धुलोको कारणले देख्न कठिन हुने बताउँदै चालक अमर मगरले बिपी राजमार्गमा जाम र अत्यधिक धुलो हुने हुँदा समस्या परिरहेको बताए ।
अहिले त्यस सडक खण्डमा पूर्वबाट गएका गाडीहरूलाई खुर्काेट र काठमाडौँबाट आएका गाडीलाई खाल्टेमा रोकेर प्रहरीले एकतर्फी यातायात चलाउँदै आएको छ ।